ရှုခင်းအတွက် အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ | JAPAN DISCOVERY
မူလနရော » ရှုခင်းအတွက် အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ
Updated: 2016-08-19 18:30
၂၀၁၀၊ ၃လပိုင်းက အသစ်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော ရှောပင်စင်တာတစ်ခုဖြစ်ပြီး စားရင်းသောက်ရင်း ဈေးဝယ်ထွက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟကတခရီးသွားဆိပ်ကမ်းတွင် မြူနီစီပယ်သင်္ဘော၊ အပျော်စီးသင်္ဘောများလည်း...
Updated: 2016-08-09 10:32
ငြိမ်းချမ်းရေး ပန်း ခြံ
အနုမြူ ဗုံး ကျ ရောက် ခဲ့ တဲ့ ပန်း ခြံ ရဲ့ မြောက် ဖက်ပိုင်း နေရာ ၊ တောင်ကုန်းပြေပြေ လေး ပေါ် မှာ တည်ရှိ တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ပန်း ခြံ ဟာ ကြေကွဲ စရာကောင်း တဲ့ စစ်ပွဲ ကို ဘယ် တော့ မှ မဖြစ် တော့ ဘူး ဆို ပြ...
Updated: 2016-07-26 14:05
အိနစာရာမတောင်（ကမ္ဘာ့အလှဆုံး ညပိုင်းအလှ ၃ ခု စာရင်း ၀င် နာရဂစခိ ခရိုင် ရဲ့ ခရီးသွား စပေါ့）
နာဂစခိ ခရိုင် ရဲ့ အမှတ် အသား တစ် ခု လိုတောင် ထင်ပေါ် ကြော်ကြား ပြီး လူသိများ လှ တဲ့ နေရာ တစ် ခု ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နာဂစခိ ခရိုင် ရဲ့ ည အလှ ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၀လပိုင်း ၅ ရက် နေ့ မှာ ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့ တဲ့ ( N...
Updated: 2016-07-05 13:43
The Bay Bridge ဘေး တံ တားကြီး ( ယိုကိုဟာမ ၊ ခါနဂ၀ ၊ ဂျပန် )
ယိုကိုဟာမ ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်း မြို့ မှာ တည် ရှိ တဲ့ ယိုကိုဟာမ ဘေး တံတား ကြီး ကို ၁၉၈၉ ခု နှစ် ၉ လပိုင်း ၂၇ ရက်နေ့ မှာ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ ပါတယ်။ ခါနဂ၀ ခရိုင် ယိုကိုဟာမ မြို့ မှာ တည် ရှိ ပြီး အရှည် ၈၆၀ မီတာ တံတ...
Updated: 2016-07-04 16:49
မိနတို မိရိုင် ယိုကိုဟာမ လန်းမက်ခ် တာဝါ ကောင်းကင်ဥယဉ်
ယိုကိုဟာမ လန်းမက်ခ် တာဝါ ဟာ မိုးမျှော် တိုက် စီးပွားရေးအဆောက် အဦး ဖြစ် ပြီး နာမည် အတိုင်း ပဲ ယိုကိုဟာမ ရဲ့ ပြရုဒ် တစ် ခု ဖြစ် ပါ တယ်။ အမြင့် 296.33m ၊ မြေပြင် အထက် အထပ် ၇၀ ။ ရုံး ခန်း တွေ ဟိုတယ်တွေ န...
Updated: 2016-06-21 15:50
တိုကျို စကိုင်း ထရီး ( တိုကျို မိုးမျှော်သစ်ပင် )
တိုကျို စကိုင်း ထရီး ( တိုကျို မိုးမျှော်သစ်ပင် ) ဟာ ကမ္ဘာ့ အမြင့်ဆုံး ကေဘယ်ကြိုးသွယ်တန်းထားခြင်းမရှိ တဲ့ တာဝါ တိုင် ( အမြင့် ၆၃၄ မီတာ ) ဖြစ် ပါတယ်။ ၃၅၀ မီတာကို တက်ရောက် လိုက် ရင် ဖြင့် အလှကြည့်နေရာ က...